Nhau - Yasvika nguva yekusimudzira kugomo remota neMagSafe kuchaja
Yave nguva yekusimudzira kugomo remota neMagSafe kuchaja
Kana iwe uchida kurerutsa ruzivo rwekuchaja kwefoni yako mumotokari yako, inguva yekukwidziridza kugomo remotokari rine MagSafe kuchaja.Haasi chete mamoiri emota aya akanaka pakuchaja pasina waya, anobatsirawo kubhadharisa foni yako nekukurumidza.Zvakare, bvisa yezvisinganzwisisike semawoko echitubu kana kubata maoko anonzwa. Unoda kubatanidza iPhone yako (iPhone 12 kana kuti gare gare) kuMagSafe Mount Mount uye ndizvozvo.
Chekutanga, kana uri kushandisa kesi ne iPhone yako, ita shuwa kuti i MagSafe-compatible kesi, zvikasadaro inogona kubuda.Chechipiri, haasi ese MagSafe emota anokwirisa anogona kubata huremu hweiyo iPhone Pro Max musiyano.Mune dzimwe nguva, charger inogona kupera nekurema kwefoni.
Iyo Hatakalin Mount Mount iri nyore oval vent charger. Yakasimba iine magineti akavakirwa-mukati kuitira kuti foni irambe yakatsiga kunyangwe uchityaira. Sezvineiwo, pombi yekuchaja ine mhete yemwenje ye LED kukuzivisa iwe mamiriro ekuchaja.Semuenzaniso, kana pedhi yekuchaja ine chero tsvina yakanamatira pajaja, inopenya yakatsvuka.
Kunze kwaizvozvo, inyaya yakapfava ine mabhero ese uye muridzo zvine chekuita nemota inokwirisa.Kana uchida kuona chidzitiro cherunhare wakachinjika, unogona kuchitenderedza.Chechipiri, unogona kuchibvisa kuburikidza neklipu iri kuseri.
Kunyange zvazvo kambani ichivimbisa 15W yakazara yakabatana neMagSafe kuchaja, vamwe vashandisi vakashuma kuti inobhadhara zvishoma nezvishoma.Izvo zvakati, zvakanyatsovakwa kuti zvigadzirire zvose zvekutanga uye Pro versions ye iPhone seamlessly.Plus, inokwanisika.
Kana usina chokwadi nezvemokumisikidzwa yemotokari inobuda, unofanira kuitarisa uchishandisa APPS2Car.Iri ndiro Mount yeDashboard kana Windshield MagSafe Mount.Ruoko rweteresikopu zvinoreva kuti unokwanisa kutambanudza ruoko nekutenderedza skrini sezvaunoda.Chii zvimwe, iyo base uye MagSafe makomo akasungirirwa kune dashboard.
Iyo APPS2Car kesi yakaiswa pane dashboard kana windshield kuburikidza nekusveta makapu.Inoshanda sekushambadzwa uye inopa iPhone yako zvaunoda, chirevo vamwe vashandisi vanotsigirwa muongororo yavo.
Vashandisi vanoda iyi gomo remota nekuti ine kusveta kwakasimba uye inogona kunyange kuchengetedza chiyero paunenge uchityaira.Iwe unongofanirwa kuve nechokwadi chekuti une MagSafe-inoenderana kesi uye uchaziva zvechokwadi.
Chinhu chakanakisisa pamusoro pejaja iyi ndechokuti, pasinei nemutengo wayo unokwanisika, kambani inopawo Quick Charge 3.0 inoenderana nemotokari yemotokari. pamagumo mapfupi kana ukaronga kubatanidza bracket kune windshield yemotokari.
Kana iwe uchitsvaga diki, minimalist mota gomo neMagSafe, haugone kukanganisa neSindox Bvumira Mount Mount.Ine diki tsoka uye inogona kuiswa mumhepo isina kutora nzvimbo yakawandisa. saizi, unogona kuitenderedza zvese zvakadzika uye zvakachinjika.
Magineti epamota iyi anoshanda sekushambadzwa kwaakaitwa. Vashoma vashandisi vari kufara kugamuchira yakakura iPhone Pro Max musiyano kunyangwe mumigwagwa ine hutsinye. haizununguki kana ichibhureki.Mugadziri anoiisa pa15W.
Iyo kambani inotumira USB-A kune USB-C tambo ine MagSafe charger, asi haina kupa inodiwa 18W mota adapta. Naizvozvo, iwe unofanirwa kutenga imwe yega.
Iyo Gloplum Magnetic Wireless Car Charger ine dual mount option.Unogona kuicheka kumhepo inofefetera kana kunamira padashboard yemota yako.Idiki uye haitadzisi maonero emutyairi.Inopa inodiwa 15W yesimba rekuchaja iPhone. Mini mukati maawa maviri.
Chinonyanya kukosha chemotokari iyi yeMagSafe ndiyo yakasimba magineti gomo, yakanakira iyo iPhone Pro Max musiyano.Mumwe mushandisi akacherechedza kuti vanogona kuita zvekumhanya-mhanya pasina kunetsekana nekudonhedza iPhone 13 Pro Max, inova yakakura kuwedzera.
Zviri nyore kumisa, uye kambani inopa inodiwa USB tambo.Asi iwe unofanirwa kutenga iyo 18W mota charger iwe pachako.
Spigen OneTap inoyevedza dashboard mota gomo ine MagSafe inochaja uye inochinjika maoko.Saka unogona kutambanudza maoko ako uye kugadzirisa hurefu.Zvinoitawo kuti uchinje nzvimbo yefoni yako.Sezvineiwo, haipe yakazara 15W yekuchaja simba.
Iyi Spigen unit inopa 7.5W yesimba ku iPhone yakabatana.Iyo iPhone yako inotora nguva yakareba kuti ichajise zvakakwana.Pamusoro pekuwedzera, unowana yemhando yepamusoro yekuvaka.Magineti akavakirwa-mukati anobata iPhone yako zvakanaka, ukuwo makapu ekuyamwa anoramba akamira. panzvimbo.
Kana yekumhanyisa yekuchaja isiri yako yepamusoro uye iwe unofarira yakanyatsovakwa uye inochinjika gomo remota, iyo Spigen OneTap isarudzo yakanaka.
ESR's HaloLock yakakurumbira paAmazon nekuda kwesimba rayo rakasimba rekubata uye nekukurumidza kuchaja kumhanya, uye iyo itsva HaloLock ine CryoBoost haina mutsauko.Kutenda kune inosanganisirwa fan uye yekutonhodza tekinoroji, inopa kumhanya kwaunoda pasina kukanganisa kupisa.
Magineti ane simba uye vashandisi vanogona kusvina zviri nyore yavo iPhone Pro Max variants.Panguva imwecheteyo, hwaro idiki uye haitore nzvimbo.
Iyo chete yakaderera kuHaloLock MagSafe Mount Mount ndeyekuti vateveri vanowanzoita karuzha.Ruzha rweFan rinogona kuenda risingazivikanwe kana uchiteerera redhiyo kana kuridza mimhanzi uchityaira.Asi kana zvisiri, ungafanira kujaira. kune inononoka hum.
Zvisinei, iyo ESR HaloLock inodhura kupfuura mamwe ayo ari pamusoro.Asi kana uri kutsvaga kutenga gomo remotokari neMagSafe inochaja pasina kukanganisa kumhanya uye kunaka, iyi inotarisa bhokisi rakakodzera.
Aya ndiwo mamwe emagetsi emota anoenderana neMagSafe.Pamusoro pezviri pamusoro, kune mamwe, akadai seBelkin MagSafe Inopindirana Mota Yefoni Magnetic Kuchaja Mount.Zvisinei, vashandisi vashoma vakanyunyuta pamusoro pekusasimba kwayo.Kana uri mumwe munhu. uyo anowanzo tyaira mumigwagwa isina kunaka, ungada kufunga nezvazvo.
Zvinyorwa zviri pamusoro zvinogona kunge zvine maaffiliate links anobatsira kutsigira Guiding Tech.Zvisinei, izvi hazvikanganisi kuvimbika kwedu pakupepeta.Zviri mukati zvinoramba zvisina tsarukano uye ndezvechokwadi.
Namrata anofarira kunyora nezvezvigadzirwa uye zvigadzirwa.Ave aine Guiding Tech kubva 2017 uye ane makore angangoita mashanu ehunyanzvi hwekunyora maitiro, sei-tos, kutenga madhairekitori uye anotsanangura.Kare, akashanda semuongorori weIT paTCS, asi akamuwana. kufona kumwe.